कहिले खुल्छ चलचित्र क्षेत्र ? – bampijhyala.com
Home > समाचार > चलचित्र > कहिले खुल्छ चलचित्र क्षेत्र ?
कहिले खुल्छ चलचित्र क्षेत्र ?
४ मंसिर २०७७, बिहीबार १०:३८ bampijhyala
चलचित्र संघ भन्छ– हामीलाई राज्यले हेपेको हो
बाँपीझ्याला, काठमाडौं । कोरोना भाइरस (कोभिड –१९)को त्रास दिन प्रतिदिन बढ्दो छ । विश्वमै महामारीको रुपमा फैलिएको यो भाइरसको संक्रमण नेपालमा पनि बढ्दो अवस्थामा छ । नेपालका कोरोनाभाइरसको संक्रमण देखिएलगत्तै सरकारले संक्रमण रोकथामका लागि विभिन्न मेला, महोत्सव, पार्टी, फिल्म क्षेत्रलगायत भिडभाड हुने गतिविधिमा रोक लगाएको थियो । तीमध्ये अधिकांश क्षेत्र अहिले खुले पनि फिल्म क्षेत्र अझै खुल्न सकेको छैन । जसका कारण फिल्मका छायांकनदेखि रिलिजसम्मका सबै गतिविधि लगभग ठप्प छन् भने फिल्म क्षेत्रले ठूलो घाटा व्यहोर्नु परेको छ । यससँग सम्बन्धित हजारौँ मानिस बेरोजगार भएका छन् ।
लामो समयदेखि फिल्म क्षेत्र बन्द रहँदा कामबिहीन भएका कतिपय कलाकार र प्राविधिकहरुको दैनिक गुजारामै समस्या देखिन थालेको छ । लकडाउनका कारण रोकिएका, घोषणा गरेर छायांकन तयारीमा रहेका, निर्माण पूरा भएर प्रदर्शनका लागि तयार थुप्रै फिल्म अलपत्र परेका छन् ।
यातायात, होटल, उद्योग व्यवसायलगायत सबै क्षेत्र खुलिसक्दा पनि किन खुल्न सकेन फिल्म क्षेत्र ? हामीले फिल्म क्षेत्रका विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधिसँग यो प्रश्नलाई जिज्ञासाको रुपमा राखेका छौँ । प्रस्तुत छ, उनीहरुको धारणा जस्ताको तस्तै–
हामीलाई हेपेको हो
¬मधुसुदन प्रधान, अध्यक्ष, नेपाल चलचित्र संघ
फिल्म क्षेत्र खोल्ने भनेर पहल गर्दागर्दै हैरान भइसकियो । सम्बन्धित ठाउँमा यो क्षेत्र खोल्नुपर्छ भनेर पटक पटक कुरा राखेका पनि थियौँ तर अझै खुलेको छैन । जसले यो क्षेत्र खोल्नुपर्ने हो, उसले पटक्कै सुनेको छैन । सबै क्षेत्र खोलेर पनि हाम्रो क्षेत्र खोलिएको छैन ।
हामीले फिल्म क्षेत्र खोल्ने विषयमा आन्दोलन गरौँ, दबाब दिउँ भनेर पनि छलफल गरेका थियौँ तर यस्तो अवस्थामा आन्दोलन गर्नु उचित नहोला भनेर रोकेका हौँ ।
चलचित्र विकास बोर्डमार्फत दुई पटक लिखित ज्ञापनपत्र नै बुझाएका छौँ । विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड अनुसार हामी ५० प्रतिशत दर्शक राखेर सबै सुरक्षा सतर्कता अपनाएर, सेनिटाइजर प्रयोग गरेर, अनलाईन टिकट बुकिङ गरेर, १२ घन्टा हलमा डाक्टर ‘स्ट्याण्डबाई’ राखेर चलाउँछौँ भनेर भनेका थियौँ ।
सञ्चारमन्त्री, अर्थमन्त्री, प्रधानमन्त्रीलगायतमा ज्ञापनपत्र बुझाएका छौँ । हामीले गर्ने जति उपाय सबै गरिसकेका छौँ, केही उपाय बाँकी छैन । यातायात, रेष्टुरेन्ट, रिसोर्टलगायत सबै क्षेत्र खोल्दा पनि हाम्रो फिल्म क्षेत्र नखुल्नु भनेको हामीलाई, हाम्रो क्षेत्रलाई राज्यले हेपेको हो ।
अब खोल्छ कि !
रोज राणा, महासचिव, चलचित्र निर्माता संघ नेपाल
अहिले सबै क्षेत्र खुलिसकेको छ । हाम्रो क्षेत्रमात्र नखोलेको कारण हामीले बुझ्न सकेका छैनौँ । हाम्रो क्षेत्रमात्र नखोल्ने नीति बनाएको त होइन होला सरकारले ।
आवश्यक सावधानी अपनाएर सुटिङका लागि जाने काम हामीले फाट्टफुट्ट गरिरहेका छौँ । अहिले सुटिङमा जान त समस्या छैन । समस्या भनेको भिडभाड हुने चलचित्र घरको हो । चलचित्र घरका साथीहरुले पनि सम्पूर्ण सुरक्षा सतर्कता अपनाएर सञ्चालन गर्छु भन्नुभएको छ । यसमा केही कठिनाइ छ भने राज्यले हामीलाई बोलाएर सल्लाह लिन सक्छ, हामी सल्लाह गर्न, आवश्यक सहयोग गर्न तयार छौँ ।
अब त खोल्ला कि, खुले पनि दर्शक नआउने समस्या होला कि भन्ने डर छ । छिट्टै खोल्छ भन्ने आश गरौँ । भारतमा पनि फिल्म क्षेत्र खोलेर दर्शक न्युन भएका कारण फेरि बन्द भयो रे । हाम्रोमा त्यसो नहोला । मलाई लाग्छ, यो क्षेत्र छठपछि खुल्छ ।
फिल्म क्षेत्र नखुलेर निर्माताहरु खासै समस्यामा छैनन् । फिल्म बनाउने भनेकै पैसा भएकाले हो । केही निर्माताले ब्याजमा पैसा लिएर फिल्म बनाएका छन् । तिनका लागि केही अप्ठ्यारो होला । निर्माताभन्दा पनि काम गरेर खाने प्राविधिकहरु अहिले धेरै अप्ठ्यारोमा छन् ।
केही भन्न सकिन्न
रविन्द्र खड्का, अध्यक्ष, नेपाल चलचित्र कलाकार संघ
फिल्म क्षेत्र कहिले खुल्छ भनेर भन्न सक्ने अवस्था छैन । यो क्षेत्र खोल्ने विषयमा धेरै पटक छलफल पनि भएकै हो । केहीदिन अगाडि पनि तिहारलगत्तै खुल्ने, भौतिक दुरी कायम राखेर, स्वास्थ्य सुरक्षा अपनाएर खोल्ने भन्नेबारे छलफल भएको थियो ।
हामी कलाकारले सचेतनाको कार्यक्रमहरु समेत गर्ने, हल खोल्दा कसैलाई अप्ठ्यारो पर्दैन, थोरै मानिस राखेर फिल्म हल चलाउने भन्ने विषयमा राज्यसँग छलफल पनि भएको हो । सरकारलाई हामी पनि कोरोना नियन्त्रणमा सहयोग गर्छाैँ, फिल्म क्षेत्र खोल्नु प¥यो भनेर भनेकै हो । फेरि भोलिबाट खुलाउने प्रोसेसमा लाग्ने सोच छ ।
फिल्म क्षेत्र नखुल्नाले सिनियरभन्दा पनि जुनियर कलाकार एकदमै अप्ठ्यारोमा छन् । थोरै पारिश्रमिकमा जीवन चलाउँदै आएका उनीहरु करिब एक वर्षदेखि कामबिहीन छन् । खुल्दैमा सबै सहज हुने भन्ने होइन तर बिस्तारै चलायमान भयो भने समस्या निवारण हँुदै जान्छ । पहिले झै चलायमान हुन भने एक वर्ष लाग्छ होला ।
भोकै मर्न लाग्यौँ
पुष्कर लामा, अध्यक्ष, नेपाल प्राविधिक संघ
फिल्म क्षेत्र कहिले खुल्छ भनेर अहिलेको अवस्थामा कसैले भन्न सक्दैन । हामीले पटक पटक यो क्षेत्र खोल्नुपर्छ भनेर लिखित पनि दिएका हौँ, पहल पनि गरेका हौँ ।
अहिले फिल्म क्षेत्र नखोल्दा प्राविधिकहरु धेरै समस्यामा छन् । लकडाउन भएको केही महिनायता प्राविधिकहरु समस्यामा छन् भनेर राज्यलाई जानकारी पनि गराएका थियौँ । हामीले राहत बाँडेर अहिलेसम्म धानेका छौँ । सधैँ राहत दिन पनि सकिन्न र हँुदैन पनि । सरकारले फिल्म क्षेत्र खोलेर काम गरेर खाने वातावरण हामीलाई बनाइदिनु पर्छ भन्ने लाग्छ । होइन भने भोकै मर्छाैँ ।
फिल्म क्षेत्रले मात्र कोरोना सारेको भनेजस्तो देखियो
दयाराम दाहाल, अध्यक्ष, चलचित्र विकास बोर्ड
अब खुल्नुपर्ने हो । अस्ति तिहार अगाडि पनि सञ्चार मन्त्रीलाई विकास बोर्डमा बोलाएर हामीले कुरा गरेका थियौँ– छिटोभन्दा छिटो फिल्म क्षेत्र खोल्नु प¥यो भनेर ।
हामीले काम गर्न पाएनौँ, अहिले त फिल्म क्षेत्रले मात्र कोरोना सारेको जस्तो देखियो, अरु सबैजसो क्षेत्र खुलिसक्यो, हाम्रो क्षेत्रमात्र बाँकी छ भनेका थियौँ ।
हाम्रो कुरा सुरेर मन्त्रीज्यू पनि पोजेटिभ हुनु भएको छ । अब खोल्ने हो भन्नुभएको थियो । सायद अब खुल्छ होला ।
फिल्म क्षेत्रको सबै संघसंस्थाको आवाज पनि मन्त्रालयमा पठाएको छु । सञ्चार मन्त्रालयले पनि फिल्म क्षेत्र खोल्ने विषयमा दसैँ अगाडि नै सिसिएमसीमा प्रतिवेदन पठाएको हो । सुरक्षा लगायतका विषयमा म आफैले ब्रिफिङसमेत गरेको थिएँ । मलाई त दसैँ अगाडि नै खुल्छ भन्ने आश थियो । त्यो भएन । तिहारमा खुल्छ भन्ने थियो । त्यो पनि भएन । अब छठपछि भने अवश्य खुल्छ होला ।
अब खुल्न कुनै पनि क्षेत्र बाँकी छैन । त्यसैले नेपाली फिल्म क्षेत्र पनि खोल्नुपर्छ । मन्त्रीज्यूलाई मैले सबै क्षेत्र खोलिसक्दा पनि फिल्म क्षेत्रमात्र किन बन्द गरेको ? यो क्षेत्र बन्द हुँदा लाखौँ मानिस प्रभावित भएका छन्, चाँडोभन्दा चाँडो खोलिदिनु प¥यो भनेर भनेको थिएँ । उहाँले छिट्टै खोल्न पहल गर्छु भन्नुभएको छ ।
विकास बोर्डले पनि फिल्मकर्मीका लागि सक्दो राहत प्याकेज ल्याएको छ । तर सधैँ राहत बाँडेर हुँदैन । फिल्म क्षेत्र खोलेर काम गर्ने वातावरण बन्नु पर्छ र वातावरण बनाउन सबैको सहयोग चाहिन्छ ।
नेपाल धितोपत्र बोर्डमा युनियन लाइफ इन्स्योरेन्स र सानिमा लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले आईपीओ निष्काशनको लागि अनुमति माग्दै ४ मंसिर २०७७, बिहीबार १०:३८
हिलोन् नये व्यथा (फंगल इन्फेक्शन) गिनागु ? ४ मंसिर २०७७, बिहीबार १०:३८
थनु लुँय भाउ थिरकु ४ मंसिर २०७७, बिहीबार १०:३८
बाणिज्य बैंकहरुले कर्जा र निक्षेप नयाँ ब्याजदर सार्वजनिक, कुन बैंकको कति ? ४ मंसिर २०७७, बिहीबार १०:३८
प्रदेश सरकारले बजेट सार्वजनिक गर्दै ४ मंसिर २०७७, बिहीबार १०:३८